मोरङको बेलबारीमा झडपमा एकको मृत्यु , ४ घाईते - Arunkhabar.com
प्रकाशित : १२ भाद्र २०७७, शुक्रबार १८:००
विराटनगर, १२ भदौ । मोरङको बेलबारी ५ मा झडपमा परेर आज दिउँसो एक जनाको मृत्यु भएको छ । घटनामा चार जना घाइते भएका छन् । झडपमा परेर परेर ४० वर्षीय चन्द्रकुमार राईको मृत्यु भएको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी मानबहादुर राईले बताउनुभयो ।
उनका अनुसार घटनामा परेर घाइते भएका राईको उपचारका क्रममा मोरङको बूढीगंगास्थित विराट शिक्षण अस्पतालमा दिउँसो ३ बजे मृत्यु भएको हो । डीएसपी राईका अनुसार स्थानीय ३२ वर्षीय जितेन चौधरी, २५ वर्षीय दिनेश श्रेष्ठ, ३२ वर्षीय सन्तोष मगर र विक्रम राईको समूह र ४० वर्षीय चन्द्रकुमार राई, ४२ वर्षीय सईकुमार राई, ३२ को समुन्द्र राई र १६ कोे गौरव राईको समूहबीच झडप भएको हो ।
झडप गर्ने दुवै पक्ष एकआपसका छिमेकी हुन् । सुरुमा चौधरीको समूहले खुकुरी र बन्चरो लगायतका हतियारले प्रहार गरेपछि दोहोरो झडप भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
मादक पदार्थ सेवन गरेका दुई पक्षबीच बिहीबार बेलुकैदेखि सामान्य विवाद रहेको र त्यही विवाद शुक्रबार दिउँसो १ बजे झडपमा परिणत भएको डीएसपी राईले बताउनुभयो । अघिल्लै दिनको रिसईबीका कारण भएको ‘ग्याङ फाइटमा’ एक जनाले ज्यान गुमाएको प्रहरीले बताएको छ ।
झापाको बार्हदशीमा एक महिना पछि पुनः संक्रमण देखियो
ढकाल राजनीतिक आवश्यकता तर खतरा छन् सुनिल !
विराटनगर, २५ कात्तिक । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा आसन्न निर्वाचनले मोरङलाई छपक्कै छोपेको छ । मतदाता...
आफ्नो अमूल्य मताधिकार प्रयोग गर्न राष्ट्रपतिको आह्वान
buy Female Cialis online cheap, purchase clomid. काठमाडौँ, २१ मंसिर । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो चरणमा...